Soo -saareyaasha shaaha dhagaxa - Warshadda shaaha Rock & alaab -qeybiyeyaasha
Shayi Wuyi Narcissus Caan ah Wuyi Rock Oolong Shaaha Shuixian Oolong
Wuyi Narcissus waa shaah caan ku ah taariikhda iyo mid ka mid ah labada nooc ee shaaha Oolong ee waqooyiga Fujian. … Sababtoo ah bay'ad dabiici ah oo u gaar ah, Buurta Wuyi ayaa si tartiib tartiib ah u hagaajisay tayada narcissus. Waayadan dambe, taajka geedka waa dheer yahay caleemihiisuna waa ballaaran yihiin oo qaro weyn yihiin, qaabka shaahuna waa mid buuran oo cidhiidhi ah oo leh midab dhalaalaya. Ka dib marka la diyaariyo, udugga waxaa ku jira caleemo orchid oo midabka maraquna waa qoto dheer yahay. Liinta ayaa u adkaysata soo -bixidda, caleemaha hoostiisuna waa huruud oo dhalaalaya cinnabar. Waa khasnad dhaqameed ee shaaha dhagaxa Wuyi.
Hubinta Tayada Qoryaha Dhirta Caafimaadka Dabiiciga ah ee Caafimaadka leh Shaaha Qorfaha
Dabeecadda iyo faa'iidada ugu weyn ee Qorfaha Wuyi waa carafkeeda fiiqan iyo udugga gaarka ah. Qorfe, oo sidoo kale loo yaqaan Yugui, wuxuu u dhashay Mazhen Peak ee Buurta Wuyi, ama Huiyuan Rock. Laakiin si kasta ha ahaato, shaahkani waa shaki la'aan waa noocyada geedka hooyo ee Wuyi. Shaaha qorfe ayaa la ogaaday in ka badan boqol sano.
Tieguanyin Nooca Shiineeska Nooca Dabiiciga ah ee Dabacsan Caafimaadka Fasalka Koowaad Iyo Suuq Sare Silie Tieguanyin Daad
"Tieguanyin" ma aha oo kaliya magaca shaaha, laakiin sidoo kale waa magaca noocyada shaaha. Shaaha Tieguanyin wuxuu u dhexeeyaa shaaha cagaaran iyo shaaha madow. Waa shaah nus-khamiir leh. Tieguanyin waxay leedahay “guanyin qaafiyad” u gaar ah oo leh udgoon cad iyo qaafiyad xarrago leh. Waxay leedahay orchids dabiici ah ka dib markay soo baxdo. Udugga, dhadhanku waa daahir oo xoog badan yahay, udgoonku waa mid waara, wuxuuna leeyahay sumcadda “toddoba xumbo oo udgoon leh”. … Tieguanyin wuxuu ka kooban yahay heerar sare oo ah asiidhyada amino, fiitamiinno, macdan, polyphenols shaah iyo alkaloids, waxay leedahay nafaqooyin kala duwan iyo maaddooyin daawo, waxayna leedahay shaqada ilaalinta caafimaadka iyo daryeelka caafimaadka.
Shaah Puer Shaah Yunnan Pu'Er Shaaha Organic Pu-erh Shaaha Organic Sheng Puer Cake
Shaaha bisil ee Pu'er waa shaah laga sameeyay Yunnan shaah cagaaran oo caleen qorrax-engegay ah oo ah alaab ceeriin ah oo lagu farsameeyo hababka sida halsano. Midabku waa maroon, dhadhanku waa daahir wuxuuna leeyahay udug gabow oo gaar ah. Shaaha bisil ee Pu'er waa dabeecad khafiif ah wuxuuna leeyahay shaqooyin caafimaad sida quudinta caloosha, ilaalinta caloosha, diirinta caloosha, hoos u dhigidda lipids -ka dhiigga, iyo miisaanka oo yaraada.
Shaaha Pu'er Dabiiciga ah ee Ugu Fiican ee Dhimista Dabka iyo Caloosha Nafaqada leh
Shaaha cayriin ee Pu'er waxaa loola jeedaa caleemo shaah oo kala duwan oo Yunnan ah (Bingcha, Shake Brick, Tuocha, Dragon Ball). Pu'er wuxuu ku dhashay kaymaha buuraleyda ah ee kuleylaha ah iyo kuwa kuleylaha ah oo jooggiisu yahay 1,200 ilaa 1,400 mitir. Waxaa sidoo kale lagu qaybiyaa waqooyiga Vietnam, Thailand, Myanmar, iyo India.
Liubao Shaaha Heerka Sare OEM 100% Dabeecadda Congou Caleenta Shaaha Madoow oo Cusub
Shaaha Liubao waa shaah dib-u-qallalan, oo ka tirsan qaybta shaaha madow. Waxay ka timid Magaalada Liubao, Degmada Cangwu, Magaalada Wuzhou, Guangxi. Caleemuhu waa alaab ceyriin ah, oo lagu baarayo hab gaar ah, waana shaah madow oo leh sifooyin tayo gaar ah leh. Taariikh ahaan, waa caan "shaah Shiine ah oo ay iibiyeen Shiinaha dibedda", oo inta badan lagu iibiyo Guangdong, Guangdong, Hong Kong, Macao iyo Koonfur -bari Aasiya. Horumarinta wershadaha, si tartiib tartiib ah ayay dunidu u ogaatay.
Phoenix Dan Cong Darajo Sare OEM 100% Dabeecadda Congou Caleenta Shaaha Madoow oo Cusub
Magaca Phoenix Dancong waa mid fiican, laakiin habka magacaabistu waa mid aad u fudud. Phoenix waa magac meel, Dancong micnaheedu waa qaadista iyo samaynta geedka shaaha oo keliya. Waxa loogu yeero Shan Cong runtii waa warshad aad u fiican oo laga soo xushay kooxda geedaha shaaha jiilalkii hore ee beeraleyda shaaha ee Buurta Fenghuang. Mabda'a xulashadoodu waa inay fiiro gaar ah u yeelato sifooyinka tayada, gaar ahaan gaar ahaanshaha udugga, iyadoo xoogga la saarayo tayada ee aan la miisaanin. Kani waa qaabka uurjiifka ee geedka shaaha. Habka asalka ah ee xulashada dhirta shaaha ee aadka u fiican waxaa loo aanayn karaa habka xulashada astaamaha caadiga ah.
Jumlada Shiinaha ee Dongding Oolong
Shaaha Dongding oolong, oo loo yaqaan shaaha Dongding, waa shaah aad looga yaqaan Taiwan. Dongding shaaha oolong waa nooc ka mid ah shaaha Taiwan Baozhong. Waxa loogu yeero "shaaha baozhong" waxaa lagu magacaabaa Anxi, Fujian. Dukaanka shaaha ee xaafadda waxaa lagu iibiyaa shaah leh laba waraaqood oo af-cayriin ah, gudaha iyo dibaddaba waa is waafaqaan, 4 taleelo oo shaah ah ayaa la gelinayaa boorso afargeesle ah, oo bacda dibadda ah waxaa lagu daboolay calaamadda xariiqda shaaha, iyo ka dibna lagu iibiyo boorso, taas oo loo yaqaan "abuurka bacda." . Shaaha Taiwan Baozhong waa shaah dhexdhexaad ah ama dhexdhexaad ah, sidoo kale loo yaqaan "Shaah udgoon Oolong".
Shaaha Da Hong Pao ee shaaha Shiinaha
Dahongpao, oo laga soo saaray Buurta Wuyi, Fujian, waxaa iska leh shaaha Oolong oo leh tayo aad u fiican. Shaaha caanka ah ee caanka ah ee Shiinaha. Qaabka ayaa si adag loo guntaday, midabkuna waa cagaar iyo bunni, maraquna waa oranji dhalaalaya oo huruud ah ka dib marka uu soo baxo, caleemihiisuna waa casaan iyo cagaar. Tilmaanta ugu fiican ee tayada ayaa ah udgoonka hodanka ah ee leh udugga orchid, udgoonka sare iyo kan dheer, iyo “heesaha dhagaxa” ee muuqda.